Abanamakhono umculi-MP Andrey Ivantsov
Umlando Omfushane umculi
Andrey Ivantsov ozalwa Agasti 22, 1966 ku baye edorobheni okuthiwa Lipetsk. Umculi has a ephakeme Economist imfundo, wakwazi ukuthola izincwadi in the State Pedagogical University of Astrakhan. Maphakathi nawo-Eighties umculi wakhonza Army Soviet. Yabe isiya Astrakhan, lapho eqala ukusebenza njengoba umdwebi lula.
Kusukela ngo-1993 Ivantsov Andrey It is asathuthuka ibhizinisi layo emkhakheni wezokuxhumana, ithelevishini kanye IT-ubuchwepheshe.
Kakade ngo-2011 waba iphini Duma we-Astrakhan esifundeni. Umculi eyilungu Liberal Democratic Party.
Ukuthandwa nomsebenzi yokudala Andrey Ivantsov
Ukuthandwa ikakhulukazi njengoba umculi Andrey Ivantsov wathola kakade 2014-2015. Kuze kube manje, umculi njalo unika amakhonsathi emadolobheni ahlukene we Russian Federation. Izingoma ethandwa kakhulu ekusebenzeni kwakhe ingoma ibizwa ngokuthi "Ndodakazi," "Ungenzi amaphutha, guys," "Umngane wami othandekayo," nokunye.
Ekupheleni kuka-July-ekuqaleni kuka-August, wahlela uchungechunge amakhonsathi emzini Voronezh, kodwa enqatshelwe ukuba wenze kanjalo. Kungenjalo, umabi kuhlulekile ukusebenzisa ukhetho kuya Duma zesifunda Voronezh. Ngakho, amakhonsathi eside elindelwe abangu kukhanselwe.
Kuyaphawuleka ukuthi umculi ukuphila sasivumela evulekile, baxhumana nobezilaleli zabo, inamakhasi ekuxhumaneni nomphakathi njengokuthi "Ofunda nabo", "Vkontakte", iwebhusayithi iqembu olusemthethweni nokunye. Lokhu kuvumela abalandeli ukuze azigcine ekhuthele, ukusekela umculi, bheka isithombe Andrey Ivantsov neziqeshana ukubunjwa, ukumsiza ukudala.
Okusanda ukhiphe i-video entsha ingoma Andrew Ivantsova "ngemuva njengoba odongeni." Abalandeli baye bakwazi ukubona futhi wazise umsebenzi.
Omunye amakhonsathi odlule kwaba umculi ekhonsathini emzini Tula. It linjengezwi engcono izingoma ezintsha futhi othandekayo kakade ubudala. Ngaphezu izinkulumo ezisemthethweni, bonke abalandeli ababeza ekhonsathini waba nethuba uthole umbhalo wesandla futhi ukuthatha isithombe ne umlingisi.
Novemba 26 Andrey Ivantsov uyokwenza Voronezh. Bayobe eyenziwa umculi ethandwa kakhulu hits, izingoma ezintsha nezindala. amathikithi Concert angathengwa kwi website esemthethweni.
Kuze kube manje, udumo umculi likhula, kubonakala abalandeli abaningi. iculo umculi sika ugqozi wonke abafundi okukukho okuthile eyabo, futhi umculi vocal owuthanda futhi ejabulisa indlebe. Manje repertoire umculi liqukethe izingoma lyrical nangokomzwelo. Amagama nomculo kuyinto namanothi kakhulu, ukunika amandla cishe zonke Ukwakheka abe hit ethandwa. Okubaluleke kakhulu kubhekwa yokuthi izingoma ukutshela izilaleli ngempilo, elula futhi real njengoba sinjalo. Ngenxa yalesi sizathu, umculi kungenziwa okuthiwa kazwelonke, futhi izingoma ngokwethukela iyaduma hits.
Iqembu "Band Odessa" kanye nezici zayo
I "Mirage": umlando, discography, isithombe. uhlelo Old
Moscow Ephakeme Umculo School. Tchaikovsky (somculo)
Besina abahlukahlukene Gypsy
Viktoria Mullova: Biography, lokusungula, empilweni yakho
Funda indlela ukudonsa izintambo phezu isiginci kahle
Ake sibheke indlela ukuthola iphasiwedi kusukela WiFi
Ama-CDMA amafoni - kuyini? Amanethiwekhi eselula namarekhodi we-standard CDMA
Izinhlobonhlobo nezinhlobo umhlonyane. umhlonyane Steller
Isimiso esibalulekile kanye namagugu. izimiso Ebalulekile womuntu
Dishormonal webele isifo: uhlu izimbangela, ukuxilongwa kanye nokwelashwa
Izinwele ezinde for amadoda. Yini kwekhanda ukhetha?
"Hans": igesi isitofu labapheki professional
Njengoba kuboniswe Violet (Fairy)
"Advego": ukushintshashintsha feedbacks
Model Karlie Kloss: amaqiniso athakazelisayo nezithombe